Dawlada Fadaraalka Somaliya Ayaa Kenya Kaga Guulaystay Qaraar Ay u Gudbisay Golaha Amaanka Ee Qaramada Midoobay…… | Gabiley News
August 31, 2019 - Written by office gabiley
Muqdisho)Xoghayaha Wasaaradda arrimaha dibadda Dalka Kenya Macharia Kamau, ayaa sheegay in dowladda Kenya ay ka niyad jabtay go’aanka Golaha amaanka ee Qaramada Midoobey ku diidday codsigii Kenya ee ahaa in Alshabaab lagu daro Qodobka 1267 ee Golaha amaanka.
Wasiir Macharia Kamau, ayaa sheegay in dowladda Kenya ay dhibbane u tahay AL-shabaab oo sida uu sheegay laayay muwaaddiniin Kenyaan ah, dowladda Kenyana aysan fileyn go’aanka Golaha amaanka ku diideen baaqeeda.
Mr Macharia Kamau, ayaa sheegay in golaha amaanka ee Qaramada Midoobey ay ka filayaan in ay cadaadiska ku badiyaan Al-shabaab oo uu sheegay in dad rayid ah ay ku laayeen gudaha Soomaaliya iyo Kenya.
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobey ayaa Arbacadii diiday Qaraar Kenya horgeysay golaha amaanka kaas oo Al-shabaab lagu gelinayo qodobka 1267 ee Golaha amaanka islamarkaana dhigaya in dhulka AL-shabaab ka taliyaan aan gargaar la gaarsiin karin sidoo kalena cidkasta oo ku nool loo aqoonsanayo argagixiso lana beegsan karo.
Dowladda Soomaaliya ayaa Kenya uga guuleystay kiiskan ay Kenya ku dooneysay in ay ku banneysato dhiigga Umadda Soomaaliyeed ee ku sugan Dalka Dibadiisa iyo Gudaha, iyadoo haddaba si aan sharci ahayd ugu leyso Gobollada Jubooyibka iyo Gedo.